လက်ကမြင်းသူအချို့ကြောင့် နှစ်သန်းပေါင်း ၃၀၀ ကျော် ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်ပျက်စီးသွား
The damaged caused by vandals at Brimham Rock after one of the balancing stones has been pushed from its perch byagroup of youths. 13 June 2018. See Ross Parry story RPYROCK; An 'irreplaceable' iconic stone landmark left on the stunning York Moors after the last Ice Age has been vandalised by youths in an act of 'mindless destruction.' A series of large, balancing sandstone rocks known as Brimham Rock litter the Moors and attract thousands of visitors every year. However one of the balancing stone has been toppled from its perch byagroup of youths. Five youths were spotted pushing the rock off the crag at the National Trust owned tourist spot at Summerbridge, North YOrkis, on Friday June 1. The rocks - also known as Millstone Grit - were formed after being eroded by water, glaciation and wind. Many of the formations have been named for visitors to spot including the Sphinx, the Watchdog, the Camel, the Turtle and the Dancing Bear. Helen Clarke, from the National Trust, said: "It might have been fun for some people. "Actually, it is just completely pointless and needless." A North Yorkshire Police statement said: "At around 8.45pm on Friday, 1 Juneagroup of five young people were seen pushingarock at the top of one of the crags. "This resulted in the rock falling from the crag causing damage to the crag face. "The damage this has caused is irreplaceable and it is now inapotentially dangerous condition. "The incident has not only caused considerable damage to both the rock and the crag face, but those responsible also put themselves in danger and have createdapotential hazard for other visitors to Brimham Rocks.
ဘရင်ဟမ် ရော့ခ်ဟုခေါ်သော ကြီးမားပြီး ဟန်ချက်ညီသော ကျောက်တုံးကြီးများသည် မောစ်ဒေသတစ်ခွင်တွင် ပျံ့နှံတည်ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် ခရီးသွား ထောင်ပေါင်းများစွာကို ဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။
သို့သော် ထိုအထဲမှ ကျောက်တုံးကြီးတစ်တုံးမှာ လက်ကမြင်းသော လူငယ်အချို့၏ လုပ်ရပ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားခဲ့သည်။
အမျိုးသား အမွေအနှစ်အဖွဲ့လက်အောက်ရှိ နယူးယော့ခ်ရှိုင်းယား၊ ဆမ်းမား ဘရစ်ချ်ရှိ ခရီးသွားဒေသတွင် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့က လူငယ် ငါးယောက်က ထိုကျောက်တုံးကြီးကို ကျောက်ကလပ်ပေါ်မှ တွန်းချနေသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
ရေတိုက်စားခြင်း၊ ရေခဲတိုက်စားခြင်းနှင့် လေတိုက်စားခြင်းတို့ကြောင့် ထိုကျောက်တုံးများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
လာရောက်လည်ပတ်သူများ သိရှိစေရန်အတွက် ကျောက်တုံးများကို စဖင့်၊ အစောင့်ခွေး၊ ကုလားအုပ်၊ လိပ်၊ ကနေတဲ့ ဝက်ဝံ စသည့် နာမည်များ ပေးထားသည်။
“တချို့ လူတွေအတွက် ပျော်စရာဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ တကယ်တော့ ဒီလို လုပ်တာဟာ တကယ်ကို အဓိပ္ပာယ်မဲ့ပြီး မလိုအပ်တဲ့ လုပ်ရပ်ပါ” ဟု အမျိုးသား အမွေအနှစ်အဖွဲ့က ဟယ်လင် ကလာ့ခ်က ပြောသည်။
ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ သောကြာနေ့ ည ၈နာရီ ၄၅ မိနစ်ဝန်းကျင်ခန့်တွင် လူငယ်ငါးယောက်သည် ထိုကျောက်တုန်းကြီးကို အခံ ကျောက်တုံးကြီးပေါ်မှ တွန်းချနေကြသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောက်တုံးကြီး ပြုတ်ကျသွားပြီး ကျောက်ကလပ်ကြီး ထိခိုက် ပျက်စီးသွားခဲ့သည်။ ထိုပျက်စီးမှုမှာ အစားထိုးမရသော ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပြီး ယခုအခါတွင် အလွန် အန္တရာယ်များပြားနေသည်။
ထိုမတော်တဆမှုမှာ ကျောက်တုံးကိုရော ကျောက်ကလပ် မျက်နှာပြင်ကိုပါ ပျက်စီးစေခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုသို့ လုပ်ခဲ့ကြသူများမှာလည်း မိမိကိုယ်ကိုရော အခြား ဧည့်သည်များအတွက်ပါ အန္တရာယ်ရှိစေခဲ့ကြသည်ဟု နယူးယော့ခ်ရှိုင်းယား ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယခင်ဆောင်းပါးကားပေါ်တွင် မိတ်ကပ်ပြင်ရင်း မျက်လုံးအိမ်ထဲ မျက်ခုံးမွှေးဆွဲတံ စိုက်ဝင်သွား
နောက်ထပ်ဆောင်းပါး၂၁ ရာစု ပင်လုံ တတိယအကြိမ် ညီလာခံတွင် ကရင်ပြည်နယ်မှ ဆွေးနွေးမည့် အကြောင်းအရာများ အတည်ပြုပြီးစီး